भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नेम्वाङको सय दिनमै देखियो काम ! – Khabarhouse
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नेम्वाङको सय दिनमै देखियो काम !
Khabar house | २७ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १६:२७ | Comments
काठमाडौं, २७ फागुन । मन्त्रीहरुको कामप्रति जनस्तरबाट निकै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मंसिर चार गते मन्त्रीमण्डलमा फेरबदल गरे। उनले ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीलाई हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गरे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका रघुवीर महासेठलाई हटाएर बसन्तकुमार नेम्वाङलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
गत मंसिर ५ गतेबाट आफ्नो कार्यभार सम्हालेका नेम्वाङले गरेका कामको पछिल्लो समय निकै चर्चा हुन थालेको छ । अघिल्लो मन्त्रीले २० महिनामा पनि गर्न नसकेका कामहरु उनले सय दिनमै गरेर देखाईदिएका छन् । मन्त्री नेम्बाङको सय दिनको कार्यकालमा सडक विभाग अन्तर्गतको २४ हजार ३ सय वर्गकिलोमीटर सडकको ९ हजार ५०० खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका २७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएका छन् । त्यस्तै, यसै आर्थिक वर्षभित्र उपत्यकाको थप ८५ किलोमीटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । उनकै कार्यकालमा लामो समयदेखि बिग्रिएर बसेका ट्राफिक लाइटहरु सञ्चालनमा आएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका १७ स्थानका ट्राफिक लाइटहरु बल्न थालेका छन्, भने अन्य ६ वटा स्थानका ट्राफिक लाइटहरु सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
त्यस्तै, उपत्यकामा जाम व्यवस्थापन, पैदल यात्रुको सुरक्षाको लागि आकाशे पुलको निर्माणलगायतको काम तीब्र गतिमा भइरहेको छ । यता राष्ट्रिय गौरवको आयोजनातर्फ मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत १८ किलो मीटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । ६ वटा पुल निर्माण भएका छन् । हुलाकी सडकको ४८ किलोमीटर सडक कालोपत्रे भएको छ ।
त्यस्तै, उत्तर दक्षिण राजमार्गको ३३ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ । गल्छी–त्रिशुली–रसुवागढी सडकको ७ किलोमीटर सडक कालोपत्रे भएको छ । मदन भण्डारी राज मार्गको २६ किलोमीटर सडक कालोपत्रे भएको छ, भने ११ वटा पुल निर्माण भएका छन् । यस अवधिमा मुलुकभर दुई सय किलोमीटर सडक कालोपत्रे भएको छ ।
१३० किलोमीटर सडक ग्राभेल भएको छ, भने ६९ किलोमीटर ट्र्याक खोल्ने काम भएको छ। यता रेलमार्गतर्फ निजगढ–बर्दिबास खण्डमा दुई किलोमीटर ट्र्याकवेड निर्माण भएको छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निजगढ भरतपुरको डीपीआरको सम्झौता भई कार्य सुरु भएको छ । यी बाहेक पनि देशभर यातायात तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा साना–ठूला निकै कामहरु भएका छन् ।